Abantu abaningi ungathandi ukufunda amabhuku abalobi engaziwa, futhi kuyize. Samizdat - yindawo lapho ungathola incwadi ngendlela esilindele yakho futhi ukuhlangabezana abalobi entsha. Olga Gorovaya - nombhali zothando ethandwa. Uzokhanga kubo bonke abalandeli lolu hlobo.
Bangaki amanoveli eshicilelwe kuze kube manje
On Web sites, self-ukushicilela zingatholakala 29 amanoveli. Umbhali Gorovaya Olga wedwa kuwenza kumaphothali cishe zonke ethandwa. Ngifunde yonke babo abalandeli kwesisodwa futhi wathola ngokwanele imiklomelo lesetulu. Ngokungafani nabanye abalobi abaningi Olga wenza izincwadi zabo etholakalayo, kangangokuthi ziye kwakuqala ukwanda eliphezulu.
izilaleli wakhe - abesifazane bobudala obungefani, abakwaziyo lokho uthando oluyikho ukwabelana sengqondo enenhlonipho kule umuzwa.
A inzuzo enkulu kungenziwa ngokuthi ukuthi Olga Gorovaya ubhala kwayena ezithakazelisayo. Ngakho-ke, singaba awubeka belingana umlobi odumile, abasebenzi uhlobo zothando. Izincwadi eziningi ezakho yimuphi chungechunge, kodwa kukhona amanoveli embalwa lwendaba ezivamile. Ubude namuhla wavula uchungechunge emihlanu:
"Uthando ngesimo ubudlelwane emakethe";
Trilogy of vampire.
Izindaba enkulu kunazo eqoqwe "sekofi" chungechunge. It okuthanda abathanda imisebenzi zakudala uthando, lapho abalingiswa othandweni futhi bajabule. Nokho, lolu chungechunge kufanelekile oqeda kwemizwelo nokuzijabulisa ukukhanya.
Kuphi ukuthola umkhiqizo
Njengoba sishilo ngenhla, cishe bonke amanoveli Olga Gorovaya posted on the Internet. Download kubo-tablet yakho noma smartphone nge imitapo digital ethandwayo. Leli thuba kuyobenza kulabo ungathandi ukufunda amabhuku inthanethi kusuka izikrini of laptops namanye amadivayisi.
Uma une isikhathi sokufunda konke posted on lezi inthanethi, kufanele ubheke website Wabasaqalayo. Lapha ungathola umkhiqizo yakamuva, ngokuvamile sidle. Ifunde ezimweni eziningi kuyodingeka inthanethi, kodwa ngenxa umlobi njengoba Olga Gorovaya, imele ukuhlupheka ngokuphazamiseka.
Ngaphambi kokuthi bajwayelane imisebenzi, ungafunda kumawebhusayithi ahlukahlukene Izibuyekezo amaningana yomlobi. Siyabonga ku-inthanethi ukuze uwathole akunzima. Abantu abaningi nezincomo ezinhle bahlangana inoveli "Burning uthando". Amalungu aveze ukuthi kulula kakhulu futhi esheshayo ukufunda. Ngokuvamile, uyakwazi ukuthola izitatimende ukuthi incwadi Olgi Gorovoy ukusiza kudlule isikhathi eside ekwindla nasebusika kusihlwa, njengoba beqonda cishe ku umoya ofanayo.
Ngokuvamile, Olga Gorovaya wathola Izibuyekezo omuhle kakhulu, nonelungelo isihloko izinkanyezi ekuphumeni izincwadi. Mhlawumbe thina maduze ukubona izincwadi zakhe emashalofini. Kubafanele, kulotshiwe ngokusuka enhliziyweni. Kuzo zonke amanoveli lidlulisela kahle imizwa kanye engatholakali iphutha. Isihloko inoveli ngayinye lothando zithandelana lwendaba ezingaqondakali, lobugebengu noma imizwa. Noma yiziphi izincwadi kuyinto olinganiselayo futhi yasekuqaleni.
A. P. chehov, "amahlaya" - okuqukethwe indzaba lemfisha
Kungakhathaliseki ukwakha nemivimbo engu elimazayo? Incazelo inqubo, imiphumela